World Clock7: Mametraha famantaranandro roa hafa eo amin'ny efijery (Cydia) | Vaovao IPhone
World Clock7: Mametraha famantaranandro roa hafa eo amin'ny efijery (Cydia)
Betsaka ny fanitsiana hanovana ny fisehoan'ny iOS 7 ary ny tsirairay amin'ireo fanitsiana ireo dia mifantoka amin'ny lafiny iray: endrika, loko, lohahevitra ... Ohatra, ny tweak fanakona-masoandro mifantoka amin'ny lohahevitry ny iOS raha Winterboard mamela ny mpamorona hamorona ny lohahevitr'izy ireo manokana ho an'ny iOS 7 (ho ela velona ny mpamorona!); tweak hafa, toa BlueBoard ovay ho manga ny loko fitendry zanatany iOS 7. Androany isika dia hifantoka amin'ny tweak izay manampy famantaranandro roa hafa amin'ny efijery hidin-trano, izay mety ho avy amin'ny tanàna samy hafa tanteraka: World Clock7. Ny hany lesoka nomeko ilay fanovana dia izany ovao ny font iOS 7 (amin'ny famataranandro) ary tsy dia hita maso toa ny iOS 7 izy ireo. Aorian'ny fitsambikinana ny fampahalalana rehetra momba ny Clock World7.
Famantaranandro telo avy amin'ny tanàna samy hafa eo amin'ny efijery fanidiana: World Clock7
Na eo aza ny zava-misy fa ny World Clock7 dia tena tweak tsotra, manana ny sandany $ 1.50 ary eo amin'ny repo ofisialy BigBoss. Milaza aho fa tsotra izany satria mamela antsika hametraka famantaranandro roa fanampiny amin'ny efijery hidin-tsika avy amin'ny Fikirakira ny iPad.
Mandeha any amin'ny Settings an'ny iPad izahay ary miditra amin'ny menio noforonin'i World Clock7. Azontsika atao ny manavaka ao anatin'ny menio singa manan-danja sasany ho an'ny fiasan'ny tweak marina, izay azonay alefa tahaka izay tiantsika:
Activate World Clock7: Mba hisehoan'ny famantaranandro roa eo amin'ny efijery fanidiana antsika dia tsy maintsy ampodintsika ilay tweak amin'ny fitazonana ity bokotra ity hihetsika (ankavanana).
Famantaranandro ankavia / famantaranandro ankavanana: Raha miditra amin'ny tsirairay amin'ireo menus roa ireo isika dia mahita ny famantaranandro rehetra eto an-tany miaraka amin'ny faritra misy azy avy, ka tsy maintsy misafidy izay famantaranandro tianao hiseho eo amin'ny efijery hidinao ianao amin'ny alàlan'ny fanindriana azy ireo.
Asehoy ny lohateny manokana: Raha tsorina, eo ambonin'ny famantaranandro fotsiny dia hiseho ny tanàna, fa raha te-hanamboatra ny lohatenin'ny famataranandro ianao dia tsy maintsy hampandeha ity bokotra ity ary soraty eo ambanin'ity bokotra kely ity ny lohatenin'ny famantaranandro: «Havia / Havanana famantaranandro ».
Raha vantany vao voalamina ny World Clock7, hanidy ny iPad-nay isika ary hanamarina raha mandeha izany marina:
Araka ny nolazaiko, ny hany lesoka hitako amin'ny World Clock7 dia ny fiovan'ny endritsoratra eo amin'ny efijery hidin-trano (araka ny ahitanao ireo eo ambonin'ireo tsipika ireo).
Fanazavana fanampiny - BlueBoard: ovao amin'ny manga ny lokon'ny fitendry anao (Cydia)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » World Clock7: Mametraha famantaranandro roa hafa eo amin'ny efijery (Cydia)
Izany no mitranga raha miseho amin'ny fampisehoana iPhone ny nomeraon-telefaonanao
ColorBadges: ataovy anaty faribolana ny fampandrenesana ny lokon'ny sary masina (Cydia)